Ithegi: iindlela zentengiso | Martech Zone
Ithegi: iindlela zentengiso
Iindlela zokuThengisa: Ukunyuka kweNxusa kunye neXesha loMdali
NgoMvulo, Matshi 29, 2021 NgoMvulo, Matshi 29, 2021 UTom Kuhr
I-2020 itshintshe ngokusisiseko indima yemidiya yoluntu edlala kubomi babathengi. Yaba ngumtya nethunga kubahlobo, usapho kunye noogxa, iqonga lobutshantliziyo bezopolitiko kunye nehabhu yeziganeko ezizenzekelayo nezicwangcisiweyo kunye nokudibana. Olo tshintsho lubeke isiseko seendlela eziza kuphinda zilolonge intengiso yeendaba ezentlalo kwihlabathi ngo-2021 nangaphaya, apho ukusebenzisa amandla oonozakuzaku beempawu kuya kuba nefuthe kwixesha elitsha lokuthengisa kwidijithali. Funda ukuze ufumane ulwazi ngoku
Iindlela ezintlanu zokuThengisa iiCMO kufuneka zithathe amanyathelo kwi2020
NgoLwesibini, nge-17 kaDisemba ngo-2019 NgoLwesibini, nge-17 kaDisemba ngo-2019 UJay Atcheson
Kutheni impumelelo iphuma kwisicwangciso esikhubekisayo. Ngaphandle kokwehla kohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa, iiCMOs zisenethemba malunga nokukwazi ukufikelela kwiinjongo zabo ngo-2020 ngophando lonyaka lukaGartner luka-2019-2020 lwe-CMO Spend Survey. Kodwa ukuba nethemba ngaphandle kokuthatha amanyathelo akunampumelelo kwaye uninzi lweeCMOs zisenokungaphumeleli ukucwangcisela amaxesha anzima angaphambili. Ii-CMOs zibhetyebhetye ngakumbi ngoku kunokuba zazinjalo ngexesha lokudodobala koqoqosho okokugqibela, kodwa oko akuthethi ukuba banokuzimela ukuze baphumeze umngeni
Iimpazamo ezi-3 eziPhezulu zokuThengisa ziShishini elitsha
Lwesine, ngoFebruwari 4, 2016 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 3, 2016 UMark Montini
Kutheni uqale ishishini lakho? Ndiza kubheja kwifama leyo kuba "bendifuna ukuba ngumthengisi" ibingeyo mpendulo yakho. Nangona kunjalo, ukuba ufana namakhulu abanini bamashishini amancinci endikhe ndasebenza nawe mhlawumbi uqaphela malunga nemizuzwana engama-30 emva kokuba uvule iingcango zakho ukuba awuzange ube ngumthengisi, ngekhe ubengumnini weshishini elincinci ixesha elide. Kwaye, inyani mayixelwe, iyakukhathaza kuba ungakonwabeli